Inona no rakitra an-tsoratra HTML? - Famerenana ny seminera
Text extractor is a easy way to view and save the text of a web page. Amin'ny alalan'ity fitaovana ity dia azonao atao ny manakona ireo antontan-taratasy HTML ary mahazo fampahalalana manan-danja ao anatin'ny segondra vitsy. Raha kivy ianao satria tranonkala tsy misy dikany ny tranonkala iray ary mitady vahaolana marina, ny mpandefa tsipika HTML dia safidy tsara ho anao.
Manana endri-javatra be dia be ny mpandefa tsipika HTML. Ny sasany amin'izy ireo dia resahina etsy ambany.
1. Mety ho an'ny mpandrindra
Ho an'ny mpandrindra sy programa tsy mpandrindra, ny mpandahatra lahatsoratra HTML dia hamoaka ny code sy ny lahatsoratra amin'ny pejy web. Tsy mila manana fahaiza-mampiasa programa hampiasana ity fitaovana ity ianao. Fa kosa, mila fahalalana fototra momba ny HTML sy Python ianao mba hahavitana ny asanao. Ity fitaovana ity dia tsy natao ho an'ny mpandrindra ihany fa koa ho an'ny orinasa, fanombohana, mpanao gazety ary mpianatra.
2. Text extractor ho an'ny web designer
Mpamorona tranonkala dia tompon'andraikitra amin'ny famoronana sary tsara tarehy sy tranonkala web ho an'ny mpanjifany. Raha mpamorona tranonkala matihanina ianao ary manana antontan-taratasy HTML marobe mba handrafetana, dia tokony manandrana HTML extractor ianao. Ity fitaovana ity dia miantoka ny fiarovana anao sy ny fiainanao manokana amin'ny aterineto, manome anao angon-drakitra tsara. Ankoatra izany, manangona sy mamoaka vaovao avy amin'ny sary sy horonan-tsary izy io, izay mahatonga anao ho mora ny mamorona sary manjavozavo.
3. Text extractor ho an'ny ordinatera rehetra
Ny iray amin'ireo singa tena mampiavaka ny tavoahangy HTML dia ny mandeha amin'ny rafitra Windows rehetra. Ankoatra izany, ity fitaovana ity dia azo ampidinina amin'ny navigateur rehetra ary tsara ho an'ny mpampiasa Windows 98, Me, 2000, NT, Vista, XP, 7 ary 8. Io dia hanala ny rakitrao ary hamoaka ny lahatsoratra amin'ny format malalaka.
4. Manangana sy manantanteraka ireo manampahefana sy scriptes
Amin'ny mpandefa tsipika HTML, ny webmasters dia afaka mamorona sy mitantana ireo scripts sy mpizara mora foana. Mampihetsi-po mora ny asa fanitsiana ny olona ary manao asa maro samihafa ho an'ireo mpampiasa azy izy.
5. Azonao atao ny manova ireo angon-drakitra tsy voaaro amin'ny fampahalalana azo ampiasaina
Amin'ny fampisehoana an-tsoratra HTML, azonao atao ny manova ireo angon-drakitra azo ampiasaina amin'ny fampiasana mora ampiasaina sy azo vakina tsara. Tsy mila fahaizana manandramana mampiasa io fitaovana io ianao. Io dia hijerena aloha ny antontan-taratasy HTML anao ary hanome farafaharatsiny 40 fanoratana ny ordinatera mba hisafidy, ka mahatonga anao ho mora ny manafatra ny data.
6. Tsara ho an'ny tranokalam-baovao
Ny New-York Times, CNN, BBC ary The Washington Post dia sasantsasany amin'ireo tranonkalam-baovao malaza indrindra. Amin'ny alàlan'ny tavoahangy HTML, dia azonao atao ny manaisotra ny angona avy amin'ireo tranonkala mora. Hanome vokatra tsara ho anao izany ary hamaha mora foana ny fahadisoana lehibe sy madinika. Amin'ny alalan'ity fitaovana ity dia afaka mamorona votoaty tsara ianao ary mamoaka izany ao amin'ny tranonkalanao ho an'ny lalao fikarohana tsara kokoa.
7. Ny fandoavam-bola amin'ny vidiny mirary
Farany, fa tsy ny kely indrindra, ny mpandefa tsipika HTML dia mety amin'ny fanombohana ary tonga amin'ny planina samihafa. Ohatra, afaka misafidy ny drafitra fototra ianao raha manana bilaogy manokana ary tsy mahavidy vola be. Ny drafitra fototra dia handoitra $ 20 isam-bolana ary hamotsotra ireo karazana safidy sy safidy ho anao. Na izany aza dia azo atao ihany koa ny fitsarana azy maharitra 14 andro Source .